Bodo : Mendrika ny seho faha-30 taona -
AccueilVaovao SamihafaBodo : Mendrika ny seho faha-30 taona
Pao-tsatroka. Mendrika ny seho faha-30 taona nidiran’i Bodo teo amin’ny sehatry ny mozika nandritra ny seho tetsy amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy Fanatanjahantena Mahamasina. Ny antsasaky ny lapa no nanatanterahana ny fampisehoana. Efa maotina amin’ny ankapobeny ireo mpijery nanotrona ity mpanakanto ity, izay saika renim-pianakaviana ny ankamaroany, satria saika nipetraka avokoa ny mpijery rehetra. Tazana teny ihany anefa ireo vady aman-janany sy ny fisian’ireo tanora mpankafy, izay tsy naharitra fa nitsangana nandihy teo am-pitoerana tamin’ireo hira mihetsiketsika.
Nofintinin’i Bodo tao anatin’ny ora efatra ny tantaram-piainany, tao anatin’izay 30 taona izay, nisedrany ny mangidy nefa nahitany ihany koa ny mamy. « Fiderana aloha », no lohatenin’ny fampisehoana, ka nisongadina tao anatin’ny seho ny hira fisaorana sy fiderana ilay Nahary. Tsy nisy nafeniny nandritra ny seho ny momba azy rehetra, niainga tany amin’ny fiandohany tamin’ilay fifaninanana Top 16, ka hatramin’ny nahazoany ireo zanany mianadahy. Nandalovany ihany koa anefa ny fiaraha-miasa tamin’i Bessa, ny namoizany ny ray sy reniny, izao sotasota samihafa toa ilay tsaho momba ny horonantsary mamoafady. Nisy tamin’ny ampahan’ny fiainany no niangalian’ny mpanakanto hafa toa an’i Poète Rebelle, izay nitondra tamin’ny alalan’ny Slam ny nananganany an’i Mitia ho zanany sy hafatra ho an’ny reny niteraka.
Sehon’ny tolotra tsy nampoizina ihany koa ny seho omaly, satria ankoatra ny tarika VHF sy ireo antoko mpihira nasaina manokana nahitana ny VLM 67Ha, ny Antoko mpihira Tia Andraisoro ary ny Tanora Masina Itaosy dia mpanakanto maro no nanotrona an’i Bodo toa ny tarika VHF zandriny, ny Feo Dimy, Rak Roots, Mahery…
Nanjakan’ny fihetseham-po ihany koa ity fankalazan’i Bodo ny faha-30 taona nidirany teo amin’ny sehatry ny mozika ity, satria dia nifangaro tamin’ny fanolorana mofomamy, izay tsy nampoiziny, ny hafaliana sy ny ranomaso. Anisan’ireo nanohana an’i Bodo tamin’ny fanatontosana ity seho mendrika ity ny vondrona Rlm Communication.